फक्सवागनको टप–क्लास फ्ल्यागसिप मोडल नयाँ ट्वारेग–आर नेपाली बजारमा - Arthatantra.com
काठमाडौँ । नेपालका लागि फक्सवागन गाडीको आधिकारिक वितरक पूजा इन्टरनेसनल नेपाल प्रा. लि. ले कम्पनीको टप रेन्जको फ्ल्यागसिप मोडल ट्वारेग–आर नेपाल भित्र्याएको छ । पहिले देखि नै लोकप्रिय ट्वारेग अब आर–ट्रिटमेन्टका साथ प्रशस्तै फिचर थप भएर आएको छ ।
क्लास लिडिङ ठूला एसयूभीका लागि फक्सवागन विश्वमै परिचित छ । नयाँ एसयूभी ट्वारेग–आर विश्व प्रसिद्ध ६ सिलिन्डर भी–६, ३.० लिटर टबोचाज्र्ड पेट्रोल इन्जिनद्वारा सञ्चालित छ, जसले पाँच हजार तीन सय देखि छ हजार चार सय आरपीएममा ३ सय ४० पीएस पावर र एक हजार ३ सय ७० देखि ४ हजार ५सय आरपीएममा ४५० एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ ।
ट्वारेग–आर एउटा ठूलो आकारको फन–टु–ड्राइभ लक्जरी एस्युभी हो जुन जर्मन कार निर्माता फक्सवागन समूहले २००२ देखि ब्राटिस्लाभा प्लान्टमा उत्पादन गरेको हो । नेपालमा सन् २०१० मा आधिकारिक रूपमा बिक्री बितरन गर्दै आइरहेकोे फक्सवागन ट्वारेग समाजको उच्च वर्गले रुचाएको फक्सवागन मोडल हो । २०१० मा बिक्री बितरन भएदेखि नै, ट्वारेग–आर एस्युभी सेग्मेन्तमा नयाँ बेन्चमार्क स्थापित गदै आएको छ, ।
वि.सं.२०७८ माघ २ आइतवार ११:२५ मा प्रकाशित
अघिल्लाे सिभिल बैंक खाता ‘खल्ती’ मा लिङ्क गर्दा सय बोनस र स्मार्टफोन उपहार
पछिल्लाे बीमा समितिद्धारा नविल र ग्लोबल बैंकमा खाता सञ्चालन